Mongolia, dalxiis qalaad | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Maxaa la arkaa, Safarka Aasiya
Fiiri khariidad oo ka hel Mongolia dushiisa. Ha ku jahwareerin dhulka Shiinaha, laakiin waa uun halkaa, aad buu isugu dhow yahay. Mongolia waa dal aan bad lahayn laakiin waxaa jira deris aad u awood badan sida Shiinaha iyo Ruushka.
Ma maqashay Genghis Khan? Hagaag, wuxuu ahaa Mongolian wuxuuna hogaamiye u ahaa boqortooyo aad muhiim u ah. Xaqiiqdii, Shiinuhu wuxuu lahaa boqorro Mongol ah. Taariikhdeeda siyaasadeed xoogaa wey kacsan tahay laakiin laga soo bilaabo 20-yadii qarnigii la soo dhaafay waa dal madaxbanaan iyo hadaad raadineysid meelaha qalaad… Maxaad u aragtaa tan?
2 Sida loo tago Mongolia
3 Maxaa lagu arkaa Mongolia
Waa waddan aad u ballaadhan laakiin isla waqtigaasna dad aad u tiro yar ayaa ku nool halkii kiilomitir oo laba jibbaaran oo dusha sare ah. Xitaa maanta in badan oo iyaga ka mid ahi waa reer guuraa iyo nus-guuraa in kastoo badankood ka tirsan yihiin qowmiyadda Mongolia haddana waxaa jira qowmiyado tiro yar.
Muuqaalladeeda waxaa xukuma Lamadegaanka Gobi, dhul daaqsimeedka iyo geedaha dhaadheer. Fardihiisu waa caan, iyaga oo iyaga la ah Genghis Khan ayaa sameeyay boqortooyadiisii ​​waana mid ka mid ah wiilasha uu awoowaha u yahay ee aasaasay Yuan Dynasty ee Shiinaha ee Marco Polo uu kaga hadlayo sheekooyinkiisa safarka.
Mongolisku waxay muddo dheer la dagaallamayeen Manchu, oo ka mid ahaa dadyowgii u yimid inay qabsadaan boqortooyadii Shiinaha, ilaa ugu dambayntiina loo kala qaybiyey jamhuuriyad madaxbannaan iyo dhul Shiine ah oo maanta loogu yeedho Inner Mongolia.
Caasimadiisuna waa Ulaanbaatar, magaalo qabow haddii ay jiraan markay tahay jiilaal. Waxay sameyn karaan -45 ºC! Sida iska cad, ma aadi karo jiilaalka ilaa aad rabto inaad la kulanto waxa maxaabiista Stalin ay tahay inay kala kulmaan maxaabiiskoodii cajiibka ahaa ... dhaqaalaha Mongolia wuxuu ku saleysan yahay kheyraadkeeda dabiiciga, dhuxusha, saliida iyo naxaasta asal ahaan.
Sida loo tago Mongolia
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Genghis Khan waxay qiyaastii 18 kiiloomitir koonfur-galbeed kaga beegan tahay Ulaanbaatar. Korean Air, Air China, Mongolian Airlines, Aeroflot ama Turkish waxay joogteeyaan duulimaadyo joogto ah, shirkado kale, sidaas Waxaad ku imaan kartaa duulimaad toos ah Jarmalka, Jabbaan, Hong Kong, Turkiga, Ruushka iyo Shiinaha iyo isku xirnaanta adduunka intiisa kale.
Haddii aad tahay qof xiise leh sidoo kale waxaa jira Tareenka caanka ah ee Trans-Siberian, ugu dheer adduunka. Laga soo bilaabo Beijing ilaa Saint Petersburg waa ku dhowaad siddeed kun oo kiilomitir waana laanta Trans Mongol ee ka bilaabata xadka Ruushka iyada oo loo sii maro Ulanbaatar illaa xadka Shiinaha. Maxaa safar ah! Wadar ahaan 1.100 kiiloomitir oo ku dhex socda Mongolia. Samaynta safarka tareenkaan waa khibrad aad u wanaagsan nafteeda, meel ka baxsan meesha loo socdo. Waa sidii safarkii Ithaca.
Qaar badan ayaa doorta inay qaataan safarka Moscow - Ulaanbaatar - Beijing. Inta udhaxeysa Mosko iyo Ulaanbaatar waa shan maalmood halka laga bilaabo Beijing ilaa Ulaanbaatar ay tahay 36 saacadood. Gaari kasta wuxuu leeyahay sagaal qol oo leh afar sariirood wax yar oo intaas ka badanna waxaad ku helaysaa qollo mataano ah. Tigidhada waxaa laga iibsadaa khadka tooska ah ee shabakadda www.eticket-ubtz.mn/mn waana in la iibsadaa bil ka hor.
Laakiin goorta loo safrayo Mongolia? Sidii aan nidhi jiilaalka waa mid aad u qallafsan. Cimilada halkan waa mid aad u xun laakiin qorraxdu had iyo jeer way iftiimaysaa taasna si aad ah ayey u fiican tahay. Mongolia waxay ku raaxeysataa in ka badan 200 maalmood oo qorrax leh sidaa darteed cirkeedu wuxuu ahaanayaa buluug ku dhowaad sanadka oo dhan. Qurux. Sikastaba xilliga dalxiisku waa laga bilaabo Maajo ilaa Sebtember inkasta oo ay tahay inaad maskaxda ku hayso in cimiladu ku kala duwan tahay hadba qaybta dalka. Roobab badan ayaa da'ay bilaha Julaay ilaa Ogosto, Haa runtii.
Waqti aad u fiican oo lagu aadayo Mongolia waa badhtamaha bisha Luulyo. Waxaa jira dad badan laakiin waa u qalantaa sababtoo ah waa marka Bandhigga Naadam Qaran taas oo aan gadaal ka hadli doono. Ugu dambeyntii, ma u baahan tahay fiiso? Wadamada qaar ma sameeyaan, laakiin iyagu ma ahan kuwa ugu badan. Sikastaba fiisada waxaa lagu shaqeeyaa safaaradaha iyo qunsuliyadaha Haddayna jirin mid waddankaaga ka mid ah, waxaad dalban kartaa mid ka mid ah waddamada deriska ah ee waddankaaga ah oo aad leedahay ama aad ku heli karto markii aad timaaddo, laakiin way ku adag tahay luqadda.
Fiisaha dalxiisku waa 30 maalmood iyo marka aad hesho, waa ansax in lagu isticmaalo saddexda bilood ee soo socota si loo soo saaro. Nidaamyada waxay codsadaan warqad casuumaad markaa haddii aad u baxdo booqasho abaabulan waxaad weydiinaysaa hay'adda. Ilaa dhammaadkii 2015 waddamada qaar ayaa laga dhaafay fiisaha laakiin waxay ahayd in kor loo qaado dalxiiska (Spain ayaa ku jirtay liiskaas), laakiin waxaa loo maleynayaa in dallacsiintu ay mar hore dhammaatay ee xaqiiji ka hor safarka.
Markaad ku eegno Mongolia khariidad waxaan u kala qaybin karnaa gobollo kala duwan sida ku xusan qodobbada aasaasiga ah. Caasimaddu waxay ku taal aagga bartamaha runtiina waxay kuu noqon doontaa irriddaada marka halkan waxaa ku yaal liiska waxa laga arki karo Ulaanbaatar:
Fagaaraha Sukhbaatar. Waa fagaaraha weyn waxayna ku taal taalada ninkaan dhexda, wadani aad caan u ah. Hareeraheeda waxaa ku yaal Tiyaatarka Ballet iyo Opera, Qasriga Dhaqanka iyo Baarlamaanka, tusaale ahaan.
Kaniisadda Gandan. Waxay ku jirtay meesheeda ilaa 1838 laakiin kahor intaysan kujirin bartamaha caasimada. Wax badan ayey soo korortay wixii markaa ka dambeeyay maantana waxaa ku yaal ilaa 5 suufiyado Buddhist ah. Buddhismku wuxuu ku hoos xanuunsaday Communism shantii macbud ee kaniisadda su'aasha laga qabtayna waa la burburiyey. Markii ay dhacday Midowgii Soofiyeeti, wax walba waa la dabcay, suugaantii waa la soo celiyey maantana nolol badan ayey leedahay. Waxay leedahay Buddha dhererkeedu yahay 40 mitir.
Matxafka Taariikhda Nacional. Waa tan ugu fiican in la qoyo taariikhda dalka laga soo bilaabo xilligii dhagaxa illaa iyo qarniga XNUMX-aad.
Matxafka Qaranka ee Taariikhda Dabiiciga ah. Isku mid, laakiin in si qoto dheer loo ogaado dhirta, duudka iyo juqraafiga dhulkan fog. Qalfoofka xayawaan qiroweyn uma dhinna,
Matxafka Bogd Khan Palace. Nasiib wanaag Soofiyeedku kuma burburin burburintii burburka ee ay horseedka ka ahaayeen 30s. Tani waxay ahayd Bogd Khan Jiilaalka Jiilaalka maantana waa matxaf. Dhismuhu wuxuu soo bilawday qarnigii XNUMXaad Bogd Khan wuxuu ahaa boqorkii ugu dambeeyay iyo Living Buddha. Waxaa ku yaal lix macbud oo qurux badan jardiinooyinkeeda.
Marka la soo koobo, tani waa waxa ay magaaladu bixiso, laakiin duleedka waxaad ku ogaan kartaa meelaha kale ee socdaalka soo socda:
Beerta Qaranka ee Bogd Khan. Waxay ku taal koonfurta caasimada runtiina waa dhisme buuraley ah oo ay ku jiraan sawiro godad ah iyo noocyo kala duwan oo ubax iyo fauna ah. Gudaha waxaa ku yaal keniisad qadiim ah qarnigii 20aad oo leh ku dhowaad XNUMX macbudyo iyo aragtiyo qurux badan oo dooxada ku saabsan
Beerta Qaranka ee Gorkhi-Terelj. Waxay magaalada u jirtaa 80 kiilomitir waxayna leedahay dalxiis badan oo banaanka ah sida socodka, fuulista fardaha, baaskiillada buuraha iyo waxyaabo kale. Waa dooxad qurux badan oo leh qaabab dhagax ah oo qaabdhismeed aan fiicnayn leh, dusha sare ee geedaha daboolan, iyo seeraha cagaaran ee lagu xardhay ubaxyada duurka.
Kaydka Dabiiciga ee Gun Galuut. Meesha ugu fiican haddii aad jeceshahay xayawaanka, harooyinka, buuraha, wabiyada iyo xitaa dhiiqo. Wax kasta oo ku jira boos celis isku mid ah.
Kaydka Dabiiciga ah ee Khustai. Waxay caasimada u jirtaa 95 kiilomitir waxaana jooga fardo ugu dambeeya ee adduunka. Waxaa loo yaqaan magaca fardo Przewalski, kadib sahamiskii reer Poland ee arkay 1878, ka dib markuu ku dhowaaday inuu bakhtiyo maanta waa nooc la ilaaliyo.
Maqaalkan koowaad ee ku saabsan Mongolia waxaan diiradda saareynaa inaan ku siino macluumaad ku saabsan waddanka, sida loo tago, waxa aad u baahan tahay inaad gasho iyo meelaha ugu dalxiiska badan ee caasimadda iyo hareeraheeda. Laakiin sidaan sheegnay, Mongolia way weyn tahay sidaa darteed waan sii wadeynaa inaan wadajir u ogaanno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Maxaa la arkaa » Mongolia, dalxiis qalaad
Hello Mariela, sidee tahay Marka hore, waad ku mahadsantahay qoraalka iyo xogta aad daabacday. Waxaan qorsheynayaa sanadka soo socda inaan sameeyo trans-cyberian ka Russia ilaa Beijing (Moscow si sax ah) waxaana jeclaan lahaa inaan dhowr maalmood joogo Mongolia. Laakiin waxa aniga xiiseynaya Mongolia waa dalxiis miyi, oo magaalada ka fog. Ma haysaa macluumaad kale oo arrintan ku saabsan? Sida inaad awood u leedahay inaad ku dhex noolaato teendhooyinkaas caanka ah, ama waxyaabo la mid ah.
Waad ku mahadsantahay kaalmadaada. Waxaan horey u qoray taariikhaha ku haboon safarka iyo warqada talo soo jeedinta si aan u soo galo, xogta muhiimka ah.
Salaan ka timid Argentina.
Maxaa lagu arkaa laguna booqdaa magaalada Dublin
Sannadkan u baxso Teruel ama Verona Maalinta Jacaylka jacaylkaaga